आज शुक्रबार : महालक्ष्मीको अराधाना गर्ने दिन, कस्तो होला राशिफल ? – Gandaki Voice
Home/धर्म/ज्योतिष/आज शुक्रबार : महालक्ष्मीको अराधाना गर्ने दिन, कस्तो होला राशिफल ?
आज शुक्रबार : महालक्ष्मीको अराधाना गर्ने दिन, कस्तो होला राशिफल ?
आज मिति २०७७ पुस ३ गते शुक्रबार, इस्वीसंवत डिसेम्वर १७ तारिख सन् २०२०, श्रीशाके १९४२, नेपाल संवत् ११४१, प्रमादी नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्र्धमा छन् । हेमन्त ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष चलिरहेको छ ।
सौरमान अनुसार आज मार्गशीर्ष शुक्लपक्षको चतुर्थी तिथि रहनेछ । आज श्रवण नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा व्यातिपात, करणमा बब, आनन्दादि योगमा धूम्र रहनेछ ।
सूर्य धनु राशिमा, चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २५ घटि ५० पला अर्थात १० घण्टा २३ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ६ बजेर ५० मिनेटमा विभिषण मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ बजेर १० मिनेटमा हुनेछ ।
वृषः वृष राशि भएकाहरूका लागि आज मानसिक चोट पर्ने कुरा कसैले गर्न सक्छ, अपमानित हुने ठाउमा नजानु नै बेस, तपाईंको काम विगार्नेतर्फ आफन्त, नजिकका नाता समेत लागि पर्ने छन्, आज खर्च सोचेभन्दा ज्यादा हुनेछ, मनमा तनाव, कुनै पनि काम छिटो–छिटो गर्छुभन्दा झन् ढिलो हुन जानेछ ।
कन्याः कन्या राशि भएकाहरूका लागि आज आफन्त व्यक्तिले काम विगारीदिने सम्भावना बलियो रहेको छ । मानसिक चञ्चलता, कार्यक्रममा विघ्नबाधा, पेट अथवा कम्मर दुख्ने, वायू रोग, शूल, मन परेको खानामा गडबडी, कुनै चिन्ता पर्ने समाचार सुन्नुपर्नेछ । हरेक कार्यमा सतर्कता अपनाई सम्पन्न गर्नतिर लाग्नु उचित हुनेछ।
वृश्चिकः वृश्चिक राशि भएकाहरूका लागि आज व्यापार व्यवसायबाट राम्रोे लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । थान कपडाको दोकान, किराना, मट्टीतेल, डिजल, कुनै पनि तरल पदार्थको पेसा गर्ने व्यक्तिलाई पनि पूर्ण सफलता र लाभको रहेको छ । बोली वचनले नयाँनयाँ मित्र बढ्दै जानेछन् । जे काम गर्नुछ सुखैका साथ सम्पन्न हुनेछन् ।
साइतः आज चन्द्रमा मकर राशिमा छन् । त्यसैले पूर्व र दक्षिण बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज शुक्रबार परेकाले पश्चिम दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
बिहान ६ः४७ बजेदेखि ८ः०५ बजेसम्म चर बेला
बिहान ८ः०५ बजेदेखि ९ः२३ बजेसम्म लाभ बेला
बिहान ९ः२३ बजेदेखि १०ः४१ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान १०ः४१ बजेदेखि ११ः५९ बजेसम्म काल बेला
बिहान ११ः५९ बजेदेखि १ः१७ बजेसम्म शुभ बेला
दिनमा १ः१७ बजेदेखि २ः३५ बजेसम्म रोग बेला
दिउँसो २ः३५ बजेदेखि ३ः५३ बजेसम्म उद्धेग बेला
दिउँसो ३ः५३ बजेदेखि ५ः११ बजेसम्म चर बेला
प्रहरीलाई प्रविधि, स्रोतसाधन र सुविधायुक्त बनाउन आवश्यक : मन्त्री चुमान